CryptoCarbon စျေး - အွန်လိုင်း CCRB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CryptoCarbon (CCRB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CryptoCarbon (CCRB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CryptoCarbon ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $130 749.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CryptoCarbon တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CryptoCarbon များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CryptoCarbonCCRB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0646CryptoCarbonCCRB သို့ ယူရိုEUR€0.0547CryptoCarbonCCRB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0493CryptoCarbonCCRB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0589CryptoCarbonCCRB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.586CryptoCarbonCCRB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.407CryptoCarbonCCRB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.43CryptoCarbonCCRB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.24CryptoCarbonCCRB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0858CryptoCarbonCCRB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0898CryptoCarbonCCRB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.46CryptoCarbonCCRB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.501CryptoCarbonCCRB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.342CryptoCarbonCCRB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.84CryptoCarbonCCRB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10.83CryptoCarbonCCRB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0885CryptoCarbonCCRB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0971CryptoCarbonCCRB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2CryptoCarbonCCRB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.449CryptoCarbonCCRB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.83CryptoCarbonCCRB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩76.69CryptoCarbonCCRB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦24.88CryptoCarbonCCRB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.73CryptoCarbonCCRB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.79
CryptoCarbonCCRB သို့ BitcoinBTC0.000006 CryptoCarbonCCRB သို့ EthereumETH0.000165 CryptoCarbonCCRB သို့ LitecoinLTC0.00111 CryptoCarbonCCRB သို့ DigitalCashDASH0.000729 CryptoCarbonCCRB သို့ MoneroXMR0.000731 CryptoCarbonCCRB သို့ NxtNXT5.34 CryptoCarbonCCRB သို့ Ethereum ClassicETC0.00902 CryptoCarbonCCRB သို့ DogecoinDOGE17.85 CryptoCarbonCCRB သို့ ZCashZEC0.000742 CryptoCarbonCCRB သို့ BitsharesBTS2.51 CryptoCarbonCCRB သို့ DigiByteDGB2.45 CryptoCarbonCCRB သို့ RippleXRP0.215 CryptoCarbonCCRB သို့ BitcoinDarkBTCD0.00227 CryptoCarbonCCRB သို့ PeerCoinPPC0.225 CryptoCarbonCCRB သို့ CraigsCoinCRAIG30.06 CryptoCarbonCCRB သို့ BitstakeXBS2.81 CryptoCarbonCCRB သို့ PayCoinXPY1.15 CryptoCarbonCCRB သို့ ProsperCoinPRC8.28 CryptoCarbonCCRB သို့ YbCoinYBC0.00004 CryptoCarbonCCRB သို့ DarkKushDANK21.15 CryptoCarbonCCRB သို့ GiveCoinGIVE142.78 CryptoCarbonCCRB သို့ KoboCoinKOBO14.58 CryptoCarbonCCRB သို့ DarkTokenDT0.0595 CryptoCarbonCCRB သို့ CETUS CoinCETI190.38